Ukuze bathi ezimbalwa abanikazi izindlu zangasese noma Cottages izingadi wacabanga mayelana nokwakha izoso yakho siqu, khona-ke amanga. Ngempela, ubani phakathi kwethu akusho dream of a umjuluko okuhle okugeza ngendlu, ngakho yokudla inyama namanzi, okuthosiwe phezu hlupha. Futhi uma ukwakhiwa okugeza ayo kudinga ezibonakalayo kuphela eside, kodwa futhi lwabasebenzi, kwakhiwe ngezitini BBQ ngezandla zakho ngaphansi amandla ngamunye.
izingcweti abaningi, ngemva kokufunda amapheshana akhuluma efanele, zithathwa ukuhumusha amaphupho abe amaqiniso futhi ukwakha BBQ ngezandla zabo. Kodwa zonke izinto zibe lula sobala, kubalulekile ukwazi amaphuzu ambalwa kubalulekile ukuthi kuzosiza ukwakha BBQ ngempela eliphezulu futhi ugweme ukudumazeka.
Okokuqala, ukwakha izoso eyakhiwe ngezitini ngezandla zabo, kumele usebenzise i-ofanele ngokuqondile i-isitini futhi ukulungiselela ingxube isibopho yawo ngendlela efanele. Eyesibili, futhi mhlawumbe ubunzima main ngendlela yokwakhiwa izoso - kungcono yokungabi nokuhlangenwe nakho. Futhi uma inkinga yesibili zonke ecacile, khona-ke ufanele ukuqondisisa kahle.
Eyokwakha izoso ngezandla zakho siqu, ungakwazi ukuthenga izitini eqolo futhi eliphezulu, ukumelana okushisa aphezulu. Kodwa iyiphi isitini has a Coefficient ezishisayo ukunwetshwa ingxenye ngokuvamile sihluke kakhulu CTE we isibopho yesihlabathi usimende ukuxubana. Ngakho, lapho ebangela futhi amalahle Yengcweti Yethusi, isitini olungakhiqiza ukunwetshwa engafinyelela kwengu-1 milimitha, futhi isibopho esihlabathini-usimende uqweqwe 1.5-2 mm. Umphumela ungase ube ufa ku ezakhiweni zamatshe aqoshiwe. Futhi kulesi simo, ngisho olukhonkiwe ngeke ukwazi ukuba alungise isimo.
Plus kule, noma iyiphi impahla has ethile kusengaphambili supply Ukushisa okokuqandisa. Uma sikubeka kalula, ukuguga, kithi, isitini. Ngakho-ke, izoso eyakhiwe ngezitini, ofuna kuvusa hhayi kuphela ehlobo kodwa ebusika, ngeke baba yize isheshe uma ezakhiwe ngezitini futhi ompofu izinga kunenze nisondelane isihlabathi-usimende ingxube.
izincomo Iningi professional asho ukuthi isakhiwo ngezitini BBQ ngezandla zakho akuyona akukhetha firebrick refractory lesithando obomvu. Lokhu kukhetha alichaza yokuthi isitini esithandweni kungcono bazivumelanisa okushisa, futhi ngenxa yalokho ukuphila izoso wakho uyohlala.
Kukhona okuningi impikiswano emhlabeni udaba lokho izitini abavamile. Nokho, ochwepheshe abaningi bayavuma ukuthi ubumba kunazo ayethanda salokhu ukuthi nge kwalokho elincane usimende e ingxube. Esikhathini esizayo, kubalulekile ukuba usimende BBQ. Futhi phendla you iqhinga kancane - promazhte BBQ glue, igesi silicate ezakhiweni zamatshe aqoshiwe. Ukwakheka ingcina lisetshenziswa ezivamile Ibhulashi lokupenda ungqimba elincanyana. Njengoba udayi, kungenzeka ukwengeza powder zomhlabathi isitini.
BBQ ikhipha ngezandla avame zakhiwa izingxenye ezimbili noma ezintathu: base, ibhokisi izitini nophahla. Ngokukhethekile kufanele ikhokhwe hhayi kuphela kubhasikidi ukwesekwa ezenziwe ngezitini, kodwa isisekelo. Ingasetshenziselwa njengenhlangano setshe abavamile ukhonkolo, waphonsa yensimbi nge ukuqinisa wanezela. usayizi isisekelo kufanele zifane usayizi Ngokuzayo isitini-ebhokisini, noma kube inkudlwana. Sezitofu iphonswe phansi, emgodini bemba ngokukhethekile uhlalwane ukuthulula nesihlabathi.
Esinye isici esibalulekile we grate izoso kukhona - ngehele, okuyinto zitholakala phezu kwezinkuni. Grate kumele kwenziwe nge esikhiphekayo, ukuze kwakunokwenzeka ukuthi ngezikhathi ezithile ukuhlanza emlotheni.
BBQ ukwenza izitini ngezandla zakhe, unikeza yena kuphela kodwa futhi izikhathi umkhaya nabangane ongenakulibaleka yakhe wachitha kusayithi lakho.
Indlela tube nezimo
Isisindo wokwakha igridi 50h50h4 mm: ukuzimisela mass kanye izici ezinomthelela lokhu isilinganiso
Inshokutsi yemagama ngolimi Russian. Skeleton - ke ....
Okugeza Russian eyenziwe izingodo
Theatre "onogwaja" e Yaroslavl - ephathini zezingane yangempela
Dukan Ukudla: zokupheka for the "kuhlasela", "cruise" futhi "ukuhlanganiswa"
Turkey. Side - amabhishi amahle nezindawo emangalisayo
Isiraphu 'Orvirem'. Imiyalo yokusetshenziswa
Kungani inja adle indle? Kungani kunesidingo indle inja ikati?